तपाईंको कुकुरको खुशीको पछाडि मनोविज्ञान - राम्रो एयर टीम द्वारा K9 मास्क
घर > वायु प्रदूषण कुकुर ब्लग > तपाईंको कुकुरको खुशीको पछाडि मनोविज्ञान
तपाईं एक्लै हुनुहुन्न आफैलाई अकस्मात् तपाईको पुतलीहरूसँग धेरै समय बिताउने र उनीहरूको दिमागमा के सोचिरहेको छ भन्नेमा। अमेरिकामा अधिक व्यक्तिहरू कार्यस्थलमा काम गरिरहेका भन्दा घरबाट काम गरिरहेका छन् र धेरैले अहिले उनीहरू आफ्ना कुँसी साथीहरूसँग गृह कार्यालयहरू साझेदारी गर्दछन्।
अझ ठूलो कुरा त के छ भने, धेरै जनाले नयाँ पाल्तु जनावर थपेर आफ्नो जीवन समृद्ध भएको पाइरहेका छन्, किनकि मानिसहरूले महामारीको समयमा विशाल दरमा कुकुरहरू ग्रहण गर्न थाले। कुकुरको समयमा यो अप्टिकको मतलब हामीले नयाँ र अनुभवी कुकुर मालिकहरूबाट उनीहरूका साथीहरूको मानसिकता बारे प्रश्नहरू फिल्ड गर्दैछौं। धेरै प्रश्नहरू एउटै थिमहरूमा केन्द्रित हुन्छ जुन हामी सबैले सोच्छौं: मेरो कुकुर के सोचिरहेको छ? म मेरो पिल्ला सामग्री हो भनेर निश्चित गर्न के म केहि गर्दै छु?
भाग्यवस, कुकुरको पहिचानको बारेमा अनुसन्धानले उनीहरूको दिमागमा के छ उजागर गर्न र मनोवैज्ञानिक पूर्ति र आनन्दित जीवनको लागि उनीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ।
मुस्कान को सुपरस्टार्स
कुकुरहरू दुबै परिचित छन् र अझै पछाडि विदेशी। तिनीहरूको "अन्यता" लाई बुझ्ने हो भने, तपाईंले के गर्नुपर्दछ उनीहरूको संवेदी संसारलाई विचार गर्नुहोस्। तपाईंको कुकुरहरूले ट्रेलमा हिंड्दा एकदम फरक अनुभव भोगिरहेका छन्। मानिसहरू सुन्दर शरद dayतुमा आश्चर्यचकित हुन्छन्, तर कुकुरको टाउको भुईंमा छ, जस्तो देखिन्छ तिनीहरू वरपरका चमत्कारहरू बेवास्ता गर्दछन्।
यद्यपि, उनीहरूले हामीले बुझ्न नसक्ने चीजको प्रशंसा गरिरहेका छन्: स्यालको गन्ध जसले हिजो राती हिर्काएको कुकुरहरूको सुगन्ध, कुकुरहरूको सुस्त गन्ध जो यस बाटोमा हिंडेका छ र मेरो छिमेकीको खुट्टा, जसले अन्तिम चोटि जs्गलमा उनको पैदल यात्रा गर्ने जुत्ता लगाए। मेरो कुकुर कहिले पनि गएका छैनन्। तपाईंले सायद कुकुरहरूको बारेमा सुन्नुभएको छ जसले क्यान्सर, हतियार, वा कोरोनाभाइरस सुँघ्दछन्।
यी कुकुरहरू उनीहरूको नाक शक्तिमा खास छैनन्: तपाईंको कुकुरले पनि उही चीज गर्न सक्दछ। वास्तवमा, क्यान्सर बाहिर लुगा लगाउने पहिलो कुकुरले उसको मालिकको खुट्टामा एक तिल सुँघ्यो कि उनी पटक-पटकको छाला विशेषज्ञकहाँ गई, जहाँ उनलाई मेलानोमा पत्ता लागेको थियो। कुकुरको गन्धको भावना मानवको तुलनामा १०,००० देखि १०,००० गुणा राम्रो हुन्छ।
यो मानिस र कुकुरहरुमा गन्ध प्रशोधन मा आश्चर्यजनक भिन्नता को कारण, ठूलो अंश मा छ। जबकि हामीसँग लगभग million मिलियन घ्राण रिसेप्टर्सहरू छन्, कुकुरहरूसँग ag०० मिलियन छ। तिनीहरूको एपिथेलियम, वा नाक टिश्यू हाम्रो भन्दा करिब times० गुणा ठूलो हुन्छ। र मानिसहरूमा १२ करोड र million० लाख घ्राणिक न्युरोनहरू छन् - मस्तिष्कमा गन्ध जानकारी सार्न विशेष कोशिकाहरू संलग्न छन् - कुकुरहरू, नस्लको आधारमा, २ करोड २ देखि २ अरबसम्म हुन सक्छ!
तपाईं कसरी क्षमताहरूमा यो सासको भिन्नता कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? यो भिन्नता दुई ओलम्पिक आकारको पौंडी पोखरीहरू भर्न पर्याप्त पानीमा एक चम्मच चिनी पत्ता लगाउनु जस्तै हो। अब जब तपाईंको दिमाग तपाईंको कुकुरको गन्धको अविश्वसनीय भावनाको बारेमा उडाइसकिएको छ, तपाईं यस जानकारीको प्रयोग आफ्नो कुकुरलाई सुखी बनाउनको लागि यसलाई कहिलेकाँही "स्निफिफाई वाक" बाट लिनुहुन्छ - यसलाई बाटोमा जान दिनुहुन्छ र गन्ध लिन जति समय लाग्छ चाहन्छु। त्यस्ता पदयात्राले कुकुरहरुलाई खुशी बनाउन सक्छ उनीहरु लाई वरपरको दुनिया को बारे मा धेरै जानकारी प्राप्त गर्न को लागी।
जबकि कुकुरको दिमागका केही अंशहरू विदेशीहरू हुन्, त्यहाँ केही भागहरू पनि छन् जुन धेरै परिचित हुन्छन्। संभावनाहरू छन्, तपाईंको कुकुरले तपाईंको मुटुमा एक विशेष स्थान ओगटेको छ। भर्खरको अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि तपाईंको कुकुरले तपाईंको बारेमा पनि त्यस्तै महसुस गर्दछ। तपाईंको कुकुर तपाईंलाई माया गर्छ।
कुकुरहरु आफ्ना मालिकहरु मा धेरै नै बच्चा शिशुहरु आफ्ना आमा बुबा को लागी संलग्न हुन्छ। बच्चा जस्तै, कुकुरले दुःख देखाउँछन् जब एक अपरिचित संग छोडिन्छन् र आफ्नो व्यक्तिको फिर्ताको लागि पुनर्मिलनको लागि हतार गर्दछन्। भर्खरको एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि कुकुरहरू जुन खाना र मालिकबाट वञ्चित भएका छन् उनीहरूले खानु अघि मालिकहरूलाई अभिवादन गर्न छनौट गरे। थप, तिनीहरूको मस्तिष्कको इनाम केन्द्रहरू तिनीहरूको मालिकहरूको गन्धलाई उजागर गर्दछ।
र, जब तपाइँको आँखाले तपाइँको कुकुरको भेट गर्दछ, दुबै दिमागले अक्सीटोसिन रिलीज गर्दछ, जसलाई "कुडल हर्मोन" पनि भनिन्छ। यो सबै अनुसन्धानले देखाउँदछ कि तपाईं आफ्नो कुकुरलाई केवल एउटा कम्पोनेन्टसँग खुशी पार्न सक्नुहुन्छ: तपाईं। त्यो कुडल हार्मोन रिलिज गर्न थप आँखा सम्पर्क बनाउनुहोस्। यसलाई अधिक छुनुहोस् - कुकुरहरू जस्तै प्याटहरू भन्दा बढी नै व्यवहारहरू भन्दा राम्रा! अगाडि बढ्नुहोस् र "कुकुर कुरा" तपाईंको कुकुरमा - यसले कुकुरको ध्यान तपाईंको बारेमा बढी खिच्दछ र तपाईंको बन्धनलाई सुदृढ पार्न सक्छ।
तपाईको कुकुरको दिमाग बुझ्नुले तपाईको साथीको बारेमा तपाईको जिज्ञासालाई बढाउन मात्र सक्नुहुन्न तर तपाईको पिल्लाले पनि राम्रो, आनन्दित जीवन बाच्न तपाईलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तपाईका रमाइलो साथीहरूको बारेमा जति धेरै तपाईंलाई थाँहा हुन्छ उनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न तपाईं जति बढी गर्न सक्नुहुन्छ। र अब जब तपाईं आफ्नो कुकुरको चहकिलो निलो आँखामा हेर्नुहुन्छ, उसलाई एउटा पेट रग दिनुहोस्, र चाँडै नै उहाँलाई "सुँघ्न" हिंड्नुहोस्।